DHEGEYSO-Xeer Ilaaliyihii maxkamadda ciidanka qalabka sida ee Puntland oo Boosaaso lagu diley. – Radio Daljir
Diseembar 25, 2016 2:36 b 0
Boosaaso, Dec 25 2016–Dabley hubaysan ayaa magaalada Boosaaso kudishey AUN Xeer ilaaliyihii guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida Puntland Cabdikariim Xasan, xilli uu kusugnaa bartamaha magaalada.
AUN Firdhiye ayaa xilligaas wax yar ka hor waraysi siiyey Idaacadda Daljir isagoona kahadlay dhalinyaro lagu qabtay dagaalkii Alshabaab oo lagu wareejiyey Dowladda federalka ah ee Soomaaliya.
Ciidanka Puntland amniga Puntland ee gobolka Bari ayaa gacanta ku dhigay labo nin oo ka dambeeyay dilka xeer ilaaliyihii maxkamada ciidamada qalabka sida Puntland gaashaanle sare Cabdikariin Xasan Firdhiye.
War Murtiyeed laga soo saaray shirkii madasha qaran ee kasocdey Muqdisho.